Abantu abaningi abazi ezihlobana ngayo ubuhlungu ngakwesokudla quadrant engenhla njengoba okuthile okubangela ukukhathazeka. Abanaso ukuya kudokotela, ngicela ungadluli yimuphi ukuhlolwa, olulindele okwamanje lapho ubuhlungu ngokwayo zizodamba kwayona.
Kunenye inketho: ubuhlungu kunalokho iyoba ngokwanele ukuba sikwazi ukukhuthazelela ke ayisekho kuyoba amabutho kanye uhambo kudokotela is ngenakugwemeka.
Abantu abaningi, ngosuku lomkhankaso, bayenze lukhuni bakholelwa ukuthi usongo empilweni yabo akuyona. Vuma ke, wena, nabo, cabanga ngakho: "Linda kuze kube yilapho i-self"? Nakuba ngakolunye uhlangothi, kuyinto embi. Phela, ngeke kube khona self-ukuxilongwa kanye zokuzelapha, okuyinto ngakho abathandwa ochwepheshe.
Kodwa, ake ucabange ukuthi miss ezinye zokugula sina, waqala njengoba ukusinda ilungelo quadrant engenhla, silula. Ngakho-ke, nje kudingeka khona noma imiphi imizwa ebuhlungu uxhumane emtholampilo zidlule zonke izinqubo ezidingekayo ebekiwe kuwe uma kunesidingo.
Kufanele uqale nge khona neqiniso lokuthi akuyona ngempela ukusinda ilungelo quadrant engenhla kuwuphawu isifo esithile. Ngokwesibonelo, uma kubonakala sengathi ngemva kuvelwe, ungakwazi ungesabi. Cishe, lena esimweni esejwayelekile bokuphila. Ngokuvamile, ngemva kokuba une ukuphumula kancane, ubuhlungu uzonyamalala benganakwa muntu.
Uma kwenzeka ukuthi indlela, kuphela isimo akushilo ukuthi kunyuke isibindi krovenapolnyaemost ngokwalo luye lwaqinisa nse ivolumu babe ubuhlungu ngakwesokunene sayo. Ngokuvamile, izimo ezinjengalezi kubhekwa ngokuphelele evamile.
Into efanayo ingenzeka ngemva uhlobo eqinile sezinzwa.
Peptic isilonda isifo esiswini futhi duodenum
Lokhu isizathu kungaba ngokuthi cishe ezivamile, okuholela ukusinda ilungelo quadrant engenhla. Kukholakala ukuthi isilonda peptic noma kolwelwesi ngokuvamile kuyabonakala ubuhlungu "esiswini sakhe." Kodwa inkinga duodenum nje ibakhathaze ohlangothini lwesokudla.
Lapho kolwelwesi ngokuvamile kubangelwa ukusinda ngakwesokunene sayo emva kokudla noma kunalokho, esiswini esingenalutho. Ngaphezu kwalokho, isiguli uyaphawula:
- ubuhlungu ebusuku;
- namandla adonsela phansi;
- inkinga isihlalo.
Ngeshwa, lezi zifo zivamile kakhulu, ngakho qiniseka ukuthi bonana nodokotela hhayi yakho esithombile medicate. Akukho ukudla ekhethekile, ukudla okunomsoco kanye nemithi izinga ukuqeda phansi ilungelo quadrant engenhla ngeke zisebenze.
Isibindi nje elise kwesokudla quadrant engenhla, ngakho uma izinkinga nalo, ubuhlungu etholakala kule ndawo.
Uma sikhuluma isibindi ngokwayo, isimiso, njengoba ubuhlungu obunjalo kuwo alikho. Phela, leli umzimba ayinakho eziyimpumelelo kwenzwa nokungenwa zonke izifo cishe kobuhlungu.
Kodwa lapho isibindi liye landa kangangokuba welula egobolondweni equkethe kwalapho-ke kukhona ubuhlungu futhi ukusinda ngaphansi ubambo kwesokudla. Lokhu isimo sibi ngempela futhi ngempela kudinga ukuhlaziya kanye ultrasound. Musa qinisa ne inkomba kudokotela!
Eceleni isibindi kungenye umzimba ukuthi kungaba obhekene phansi ilungelo quadrant engenhla - kwamanyikwe. Yilokho nje emizweni ubuhlungu ehambisana nayo iyingozi kancane ezahlukene kwezinye uhlamvu. Lokhu ubuhlungu uchazwa ngokuthi ozungeza, ukuthi akuyona nje kuphela ukudansela isiginci sakhe ngakwesokudla quadrant engenhla, kodwa emuva. Ixhumeke kuphela isakhiwo indlala.
Lokhu zokugula kuyingozi kakhulu futhi kwezinye izimo kuholela Imiphumela kunalokho eyinhlekelele. Ngakho into yokuqala okumele uyenze - ukubona udokotela, zidlule lonke uvivinyo ezidingekayo bese ulandela izincomo. Okuwukuphela kwendlela ukuyokudla Engcebweni yakhe bese ukhohlwa ukuthi lokhu ukusinda ilungelo quadrant engenhla.
Osteoarthritis we ngokuhlanganyela ehlombe: Izimpawu kanye Ukwelashwa amakhambi abantu, kubangela nezindlela ukuxilongwa
Ngingathola okhulelwe izinhlumba wesibeletho: Izincomo
Ikhadi Ukuvinjwa (Sberbank) ocingweni. Imiyalezo yokuvimbela intshontshiwe noma ikhadi ngephutha elahlekile
Vika - isitshalo bomkhaya imidumba. Incazelo, izici, ukutshalwa
Inhlanganisela Esitebeleni yamagama ngezilimi Russian and English
Carp zicwiliswe: iresiphi esheshayo futhi esihlwabusayo isidlo ku embodiments ezimbili,
Motorcycle K-750: Ukucaciswa nezithombe. izithuthuthu Soviet. Motorcycle "Dnepr K-750"
Zokudlela Chinese e Moscow - ingcebo China Ikhishi.
Ukube ikhemikhali bashise? Usizo kumele kube fast kakhulu!